General Indha qarshe ayaa tagaya xaryo ciidan oo ku yaalla Jubbaland – XOGMAAL.COM
Taliye Insha Qarshe Deegaanada uu booqan Doono waxaa ka mid ah Baar-sanguuni, Buulla Gaduud iyo goobo kale, Ciidamada Xoogga iyo kuwa Jubbaland ayaa xiligan waxaa ay ku sugan yihiin Duleedka Magaalada Kismaayo.
General Daahir Aadan Cilmi Indha qarshe Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka iyo xubno ka mid ah Maamulka Jubbaland la qorsheynayaa in ay tagaan saldhigyo ay joogaan ciidamada Xoogga oo ku yaala duleedka kismaayo.
General Daahir Aadan Taliyaha Ciidanka Xoogga ayaa Ciidamada ka xogwareysan doono xaalada ka jirta deegaanada ay ku sugan yihiin.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmi (Indha qarshe) Shalay ayay aheyd markii uu gaaray Magaalada Kismaayo isagoona kulamo la qaatay Madaxd kala duwan.
Sawirro:- Golaha Iskaashiga D/goboleedyadda ayaa shiri doona markii ugu horesay Hirshabeelle oo ka maqan